Bangladesh: Mampahonena ny Zavamisy Iainan’ireo Foko Vazimba Teratany · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra পান্থ রহমান রেজা (Pantha) Nandika (en) i Rezwan, Maya Sciortino, Noele Belluard-Blondel, Raveloaritiana Mamisoa
Voadika ny 14 Avrily 2012 4:32 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, македонски, Español, Français, বাংলা
Ahitana foko teratany 45 (les Adivasis) ao Bangladesh. Monina ao amin'ny tanàna kelin'ny Chittagong Hill Tracts ny iraikambinifolo amin'izy ireo, raha toa kosa ka miely manerana ny firenena ny hafa. Betsaka amin'izy ireo no tsy salama ary iharan'ny fanavakavaham-bolokoditra, fanararaotana ary fampijaliana isan'andro ny sasany amin'izy ireo.
Tao anatin'ny fanadihadiana notontosain'ny Fondation Kapeng et Oxfam (Fikambanana lehibe Kapeng sy Oxfam) [amin'ny teny bengali, tahaka ity rohy manaraka ity] mitondra ny lohateny hoe “Ny tatitra 2011 momba Zon'olombelona ao amin'ny [foko]Adivasis” , fantatra tamin'izany fa tamin'ny taon-dasa, niteraka fahamaizan-trano 111 an'ny olona teratany ny fifandonana teo amin'ny samy foko noho ny resaka adin-tany, olona 7 tao amin'ny foko no namoy ny ainy ary trano 12 hafa kosa no voaroba. Nandritra izany, vehivavy 11 tao amin'ny foko no voaolana ary novonoina kosa ny dimy tamin'izy ireo.
Foko teratany ao Bangladesh. Sary avy amin'i Anwar Hussain, copyright Demotix (9 aogositra 2010).
Mithushilak Murmu nanazava ny antom-pisian'ny fanafihana:
Toa hita fa nentanina tamin'ny resaka ara-poko ny mpifanolo-bodirindrina antsika, fiarahamonina midadasika. Tsy nomen'ny mpandimby ny Rain'ny Firenana teo aloha, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, lanjany intsony ny fisainana laika sy ny tsy fanavakavam-bolokoditra ary ny vinavina iraisana nanànana teo aloha, ka tsy nisy intsony ny fijerena ny foko niavian'ny olona. Hany ka matahotra ny mponina teratany , miaina anaty tahotra ny androatokom-piainan'izy ireo.
Malobika Tudo nilaza hoe:
Ny teny bengali no teny voalohany ianaran'ny ankizy ao amin'ny foko, kanefa tsy fitenin-dreniny ny teny bengali. Ary toa hita fa tsy mba misy miresaka amin'izy ireo ny olona ao amin'izany tanàna izany.
Ao Chittagong Hill Tracts, nankany Dhaka i Ajal Dewan mba hanohy fianarany ambony. Nanoratra tao amin'ny bilaogin'i Adibashi Bangla (teratany Bengali) izy mikasika ny olàna natrehiny amin'ny maha-teratany azy:
Mafaitra tokoa ny ankamaroan'ny zava-nihatra tamiko nandritra ny fotoana fohy niainako tao. Ny tena mafaitra dia ny hetraketraka atao amiko noho ny firazanako sy ny fiteniko. Ao anaty trano fisakafoanana, montotra amiko ny mpanolotra sakafo na raha mandeha eny an-dàlana aho ka mihira ny hira amin'ny tenin-drazako, toy izany hatrany no mahazo ahy. Tsy hitako izay olana raha mihira na miteny amin'ny fiteny bengali aho. [Toa hita fa] Toy ny heloka ny miteny amin'ny fitenin-dreniko.
Eny, na any amin'ny oniversite aza, mitohy hatrany ny hetraketraka. Mihevitra ny namako fa mihinana bibilava sy sahona izahay satria monina an-tampo-kavoana. Tsy maintsy mamaly foana aho matetika fa misy manontany sao mihinana kadradraka izahay na koa matory any anaty trano vita amin'ny hazo. […]
Antoni Rema niaina tahaka izany ihany koa :
Manao herisetra aminay izy ireo [ireo lehilahy] rehefa mandeha eny an-dalana izahay. Indrindra ny vehivavy somary mazava endrika tahaka anay, no tena hiharan'izany olana izany. Eny an-dalana, sosotra be izy ireo mijery anay ary milaza teny hafahafa (toy ny hoe Chang, Chung), tahaka ny zavatra azo vazivaziana, tevatevaina ary atao kilalao izahay. Mba tsapan'izy ireo ve ny fijaliana iainanay?
Mampiseho antsika ny karazana fampijaliana iaretan'ireo teratany ny lahatsoratra nosoratan'i Ajal Dewan sy Antoni Rema. Tsy ny teratany monina ao an-tampokavoana ihany no iharan'izany olana izany, afaka mitantara toe-javatra sahala amin'izany ihany koa ireo foko ao amin'ny firenena.
Noho ny fikasana haka sy hibodo ny tanin'izy ireo no antony voalohany mahatonga ny fampijaliana, ao koa ny fikasana haka ny asa fiveloman'izy ireo. Namoaka lahatsoratra ilay mpanao gazety Biplob Rahman rehefa avy nitsidika foko tao avaratry Bangladesh :
Miha-lasan'ny olona mipetraka ao ny tanin'ireo foko vitsy an'isa Santal de Birganj, Bandar Chirir, Fulbari ary Nababganj de Dinajpur Zila. Foko teratany Santals eo amin'ny 500 000 eo no efa tsy manan-tany intsony satria lasan'olona tsikelikely izany nandritra ny taona maro.
Nanoratra momba fijaliana iainan'ny mpiasa teratany miasa ao amin'ny zaridaina fambolena ravimboafotsy Sylhet izay notsidihany i Mithushilak Murmu:
Mandray karama 30 takas (35 variraiventy dolara amerikana) izy ireo, rehefa avy miasa mafy mandritry ny andro. Vao maraimbe, dia efa manomboka manongotra ny ravimboafotsy izy ireo ary mameno siny kely vita amin'ny bararata ary tahaka izany foana mandrapariva ny andro, ary amin'ny farany, mitondra izany hoahodina amin'izay. […] Miakatra foana ny vidin'ny ravimboafotsy isan'andro, tsy mba miakatra toy izany anefa ny tombontsoa sy ny karaman'ireo mpiasa.
Tsy nitsaha-nitombo ny fijalian'ireo olona niharan'ny fanavakavahana, sy nampahoriana ary nampijaliana taoriana ny fanamarihana nataon'ny Minisitry ny Raharaham-bahiny ao amin'ny firenena. Volana maro lasa izay, nilaza ny minisitra hoe : “Tsy misy olona teratany ato amin'ny firenena ” nandritra ny ady hevitra niarahana tamin'ny solotenan'ny fikambanana momba ny fampandrosoana sy ny diplaomaty.
Araka ny heviny, satria nandritra ny taonjato lasa, foko marobe avy amin'ny firenena mifanolo-bodirindrina no tonga nanorim-ponenana tao an-tampokavoanan'i Bangladesh, ka tsy tokony hosokajiana toy ny foko teratany izy ireo fa foko vitsy an'isa. Namaly izany fanambarana izany avy hatrany ireo foko teratany ka nanapa-kevitra hanao hetsi-panoherana ho fitakiana ny fankatoavana ny lalampanorenanana.
Mitaky ny fankatoavana lalampanorenana ny vazimba teratany Bangladesh ao Dhaka. Sary avy amin'i Abu Ala, copyright Demotix (29/4/2011).
Tao amin'ny bilaogin'i Mukto Mona, Odong Chakma nampiseho ny fomba nanovàna ny afisy lehibe misy ny sarin'ny olona teratany tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ao Dhaka (Hajrat Shahjalal). Tamin'ny afisy teo aloha, izay nahitana soratra hoe “Miran'endrika ny Vehivavy teratany ao Chittagong Hill-Tract “, nosoloina fotsifotsy ny soratra sasany ka toy izao sisa no vakin'izany ankehitriny “.. Vehivavin'ny Chittagong Hill-Tract”.
Nanontany ilay mpamahana bolongana :
Afaka esorina ve ny olona teratany amin'ny fanesorana ny anarana?
Tsara ny manamarika fa efa niara-nonina nandritra ny taon-jato folo ireo foko sy ny Bengalis, taorian'ny fivakisan'i Inde (taona 1947) anefa, dia tonga marobe ny voanjo miozolomana ary nanomboka nanorim-ponenana teny an-tampo-kavoana ao Chittagong. Nanomboka tamin'izany ny fifandonana , izay nihamafy tamin'ny taona 1979, raha nanatontosa fandaharan'asa hametraka olona atsasaky ny tapitrisa ao amin'ny tanin'ny teratany ny governemanta.
Noho izany toe-javatra izany, nilaza i Ramdaschand Hasda:
Rehefa avy niara-niaina nandritra ny an-jato taona, tsy afaka hiaraka intsony ny Bengalis sy ny vazimba teratany.
Nandika (es) i Maya Sciortino